Manambara ny fanitarana an'i Curaçao ny Sandals Resorts
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Curacao » Manambara ny fanitarana an'i Curaçao ny Sandals Resorts
Desambra 25, 2020
Sandals Resorts International (SRI), no lohalaharana manerantany rehetra-manavaka orinasa, nanambara androany ny fanaovan-tsonia fifanarahana izay hitondra an'i Sandals® Resorts ho any amin'ny toerana vaovao, ao amin'ny Santa Barbara Resort any amin'ny nosy Curaçao.
Hanamarika ny nosy fahasivy ho an'ny marika any amin'ny faritra Karaiba io. Ilay vaovao Sandal Curaçao Amin'ny voalohany dia hisy efitrano sy efitrano fitrandrahana miisa 350 mirenireny manamorona ny Helodrano Espaniola sy ny Ranomasina Karaiba, miaraka amin'ny fanitarana fanampiny kasaina hatao amin'ny taona ho avy. Teo aloha ny Santa Barbara Beach & Golf Resort, ampahany amin'ny fivoarana 3,000 hektara lehibe kokoa, dia "Sandalized" tanteraka ilay toeram-pialantsasatra, dingana iray izay hanomboka amin'ny 2021.
Sandals Curaçao dia hitondra ny fanavaozana faran'izay betsaka any amin'ny nosy, izay nanjary mitovy dika amin'ny marika Sandals Resorts malaza eran'izao tontolo izao manerana ny faritra. Ny drafitra ifotony ho an'ny toeram-pialofana dia misy manampy singa manan-danja amin'ny traikefa Sandal sonia, ao anatin'izany ny dobo mivelatra vaovao, karazana safidy fisakafoana Global-Gourmet ™ 5-Star ary trano fonenana lafo vidy, ao anatin'izany ny River Suites izay namboarina. Ny mpitsidika koa dia hanana fidirana amin'ny kianja filalaovana Tompondakan'i Pete Dye misy lavaka 18 heny, marina roa eo an-toerana ary 38,000 metatra toradroa ny efitrano fivoriana anatiny sy ivelany, ny lehibe indrindra eto amin'ny nosy.
Malaza eran'izao tontolo izao noho ny kolontsaina mamirapiratra, ny morontsiraka sy ny lava-boaloboka madio, i Curaçao koa dia mirehareha amin'ireo tranokala antsitrika mahatalanjona sy ireo ekôzistia an-dranomasina hafakely. Miaraka amin'ny mari-pana mandritra ny taona 80 degre, no lazaina fa fialana tonga lafatra amin'ny fotoana rehetra. Ny toeram-pialan-tsasatra dia hisy fiatraikany tsara, avy hatrany ary maharitra amin'ny nosy sy ny mponina ao Curaçao. Amin'ny taona voalohany fotsiny dia antenaina hanana dian-toekarena mihoatra ny 40 tapitrisa dolara sy rakitsoratra mahavariana momba ny famoronana asa vaovao. Ny toeram-pialan-tsasatra irery dia hanampy asa maherin'ny 1,200 eo an-toerana, misy mpikambana ekipa vaovao 800, ary mpanao asa tanana sy mpanao asa tanana 400 eo an-toerana. Harahin'ny vokadratsy ara-toekarena tsara ho an'ny vondrom-piarahamonina miitatra amin'ny sehatry ny taxi sy ny fitaterana eo an-toerana, ny fantsom-pamokarana bebe kokoa, ny fambolena, ny fitomboan'ny fiaramanidina ary ny fitomboan'ny isan'ny fizahan-tany isan-taona - indrindra amin'ny tsenan'ny fizahantany any Etazonia.
Roald Smeets, talen'ny Santa Barbara Beach & Golf Resort, dia nilaza hoe: "Manana fotoana tsy manam-paharoa isika hisarihana mpandraharaha hotely, tompona ary mpamatsy vola ekena eran'izao tontolo izao toa ny Sandals Resorts, izay hitondra tombony tsy manam-paharoa ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany Curaçao ary ny toekarena eo an-toerana. Ny toerany amin'ny maha mpandraharaha hotely sy tompona trano azy, miaraka amin'ny fahaizana manintona zotram-piaramanidina voalahatra avy any Amerika Avaratra, dia mampiavaka azy amin'ny vondrona hotely hafa. Hitanay ny drafitra manaitra ny tranokala sy ny fanoloran-tena amin'ny fananganana ny mombamomba an'i Curaçao ho toeram-pizahan-tany kilasy manerantany izay tena manery. Ny fampiasam-bolany ho avy eo amin'ny vondrom-piarahamonina dia hamelombelona ny tsenan'ny fizahantany, hiantoka ny fiveloman'ny fianakaviana an-jatony ary hahasoa ny olona tsirairay ao amin'ny nosy amin'ny alàlan'ny famelomana ny toekarena eo an-toerana. Curaçao dia manana ho avy mahatalanjona ho avy, noho io fisamborana vaovao manaitaitra io, izay hametraka an'i Curaçao eo amin'ny sehatra manerantany tokoa. ”
Mpanorina sy filoham-pirenena Sandals Resorts, ny Hon. Gordon "Butch" Stewart, miaraka amin'ny filoha lefitra Adam Stewart, dia nizara izao: "Fahafinaretana manokana ho anay ny miasa miaraka amin'ny governemanta Curaçao sy ny fianakaviana Smeets amin'ity ezaka vaovao manaitaitra an'ny marika Sandals ity," hoy i Gordon " Butch ”Stewart. "Tianay ny maneho fisaorana indrindra an'i Roald Smeets, izay nanampy betsaka tamin'ity fizotrany ity ary nahafaly azy tokoa ny niara-niasa taminy. Mikasa ny hanao mihoatra ny anjaranay izahay mba hampiakarana izao tontolo izao ny fankasitrahana ity firenena tsara tarehy ity. ”
Hoy koa i Adam Stewart: “Isaky ny mivelatra isika dia mitondra ny fahafaha-manao feno an'izay 40 taona nampiantrano anay. Ny Sandal Curaçao vaovao dia maneho ny filôzôfia antsika hieritreritra mialoha ary hijery alàlan'ny solomaso vaovao. Mampanantena tsy ho an'ireo vahiny ihany io fa ho an'ireo mpikambana ao amin'ny ekipantsika amin'ny fanavaozana hatrany. Curaçao dia toerana iray hahitana azy, ary tena reharehantsika ankehitriny fa lasa anisan'ity vondrom-piarahamonina ity. ”
Ny fizahantany no tsara indrindra indrindra mandritra ny krizy
Ny tompon'andraikitra Seychelles dia mandray fepetra hiatrehana ny karazana COVID-19 vaovao